‘म एक साधारण गृहिणी हुँ, अनलाइन सेक्स च्याटकी पारखी हुँ’ | Ratopati
यो आर्टिकल जनवरी ४ तारिखमा Dailyo.in मा अंग्रेजीमा छापिएको थियो ।
म एक ३६ वर्षे गृहिणी हुँ ।
मलाई थाहा छ गृहिणी शब्दमा केही विशेषता छैन । निकै पट्यार लाग्दो हुन्छ । तर यो वास्तविकता हो । म १५ वर्षदेखि विवाहित छु । हाम्रा जुम्ल्याहा सन्तान १४ वर्षका भए । मेरा श्रीमान् ३७ वर्ष पुगे र उनी स्टेशनरीको पसल चलाउँछन् । यही हो मेरो जीवन ।
र अर्को एउटा कुरा । मलाई इन्टरनेटमा कम उमेरमा पुरुषसँग सेक्स च्याट गर्न निकै मज्जा लाग्छ !
किन, अब म रोचक लाग्यो नि ?
को हुँ म ?
सुरुमा म आफ्नो बारे थोरै जानकारी दिऊँ । म एक मध्यम वर्गीय परिवारकी हुँ । घरका सदस्य पुरानो सोचका छन् । म २१ वर्षको हुँदा मेरो विवाह गराइयो । ग्रेजुएशनको एक महिनापछि नै मेरो विवाह भयो । म र मेरा श्रीमान् विवाहजस्तो जिम्मेवारी टाउकोमा उठाउनका लागि निकै साना थियौं । तर हामीले कोसिस गर्यौं ।
उनको सानो पसल थियो । घर चलाउनका लागि उनी दिनरात मेहनत गर्छन् । पसल शहरदेखि निकै टाढा थियो । हाम्रो घरबाट निकै टाढा । हामी पसलको माथिल्लो फ्ल्याटमा बस्थ्यौं ।
२१ को उमेरमा मेरो वैवाहिक जीवनको सुरुवात यही थियो । विवाहको १० महिनापछि हाम्रा दुई छोरा भए, जो जुम्ल्याहा हुन् ।
मेरो दैनिकको जीवनः
हामी निकै सानो उमेरमा आमा–बुवा भयौं । हामीलाई बच्चाको हेरबिचार कसरी गर्ने भन्नेबारे केही थाहा थिएन । तर मेरा श्रीमानले निकै कोसिस गरे । उनी एकजनालाई पसलमा लैजान्थे र अर्कोलाई म घरमा नै हेर्थे । कहिलेकाँही म थोकेका बेला उनी दुबैलाई सम्हाल्थे । पूर्णकालीन सहयोगी राख्ने हाम्रो हैसियत पनि थिएन । एक महिलाले मलाई बढार्ने, भाँडा माँझ्ने काममा सघाउँथिन् ।
हाम्रो निन्द्रा कहिले पनि पूरा हुँदैनथ्यो । मेरा श्रीमानले साथीसँग समय बिताउन बन्द गरेका थिए । विवाहको सुरुवातका केही वर्ष त बच्चाको हेरबिचारमा नै बित्यो । जबसम्म उनीहरु स्कूल गएनन् तब हामीलाई सास फेर्नसमेत फुर्सद थिएन ।
त्यतिबेला मैले ट्युशन पढाउन सुरु गरेकी थिएँ । म दिउँसो साढे तीनदेखि ५ बजेसम्म पढाउँथे । त्यतिबेला मेरा छोराहरुले आफ्नो होमवर्क सिद्धाइसक्थे । उनीहरु १२–१३ वर्ष हुँदासम्म यही सिस्टम चल्यो । त्यतिबेलासम्म उनीहरुलाई हरेक कुराका लागि मेरो आवश्यकता हुन्थ्यो । मेरो जीवन उनीमा मात्र सिमित थियो । तर उनीहरु ठूला भएपछि आफ्नै दुनियाँमा मस्त हुन थाले । साथीहरु, टिभी, भिडियो गेम्समा रमाउन थाले । उनीहरुलाई भोक लाग्दा मात्र मलाई सम्झिन्थे । मेरा श्रीमान् पनि पसलमा व्यस्त हुन्थे । मलाई एक्लो महसुस हुन थाल्यो ।
मेरो अनलाइन सेक्स लाइफः
म ३३ वर्ष पुगेकी थिएँ । एक्लो हुने भएकाले इन्टरनेटमा धेरै समय बिताउन थालेँ । च्याटिङको साइटमा पुरुषसँग कुरा गर्न सुरु गरेँ । तीमध्ये धेरै यौनका भोको थिए । उनीहरुसँग कुरा गर्दा मलाई एक्लो महसुस हुन छाड्यो । इन्टरनेटको राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं आफ्नो पहिचान लुकाएर कसैसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । नाम लुकाइएका थुप्रै अपरिचित मलाई आफ्नै लाग्न थाले ।
मैले कसैलाई पनि आफ्नो पहिचान बताइनँ । म यतिमात्र भन्थेँ कि म विवाहित हुँ । त्योभन्दा बढी कसैले केही पनि सोध्दैनथे ।
त्यसपछि मैले आफ्नो बारे राम्रो महसुस गर्न थालेँ । अबसम्म मेरो पहिचान मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिसम्म सिमित थियो । अब त्यस्तो भएन ।
मैले धेरै पुरुषसँग च्याट गरेकी छु । धेरैजसो घरबाट टाढा भएका विज्ञ छन् । यीमध्ये कोही विवाहित छन् भने कोही अहिले पनि सेक्सको खोजीमा छन् ।
म यहाँ भन्न चाहन्छु कि म एक निकै साधारण महिला हुँ । विवाह अघि मलाई कुनै पुरुषले हेर्दा पनि हेदैनथे । मैले आफ्नो श्रीमानलाई विवाहअघि मेरो पछाडि धेरै केटाहरु लाग्थे भनेर झुटो बोलेको थिएँ । तर वास्तवमा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि पुरुषको अटेन्सन पाएकी छैन ।
म महिला मात्र पढ्ने स्कूलमा पढेकी हुँ र मेरा साथीहरुलाई धेरै केटाहरुले मन पराउँथे । मे हुलाकी बनेर केटाहरुको चिट्ठी आफ्ना साथीलाई पुर्याउने गर्दथे ।
मलाई लाग्यो कि सायद यो कलेजमा परिवर्तन हुनेछ, तर भएन । केटाहरुले ममाथि राम्रो व्यवहार गर्दथे । तर मलाई त्यो नजरले हेर्दैनथे जसरी मेरा साथीहरुलाई हेर्थे । कसैले मलाई पनि याद गरोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हुन्थ्यो ।
त्यसपछि विवाह भयो । बच्चाहरु हुर्किदैं गर्दा मलाई मेरा साथीहरुसँग डाहा हुन थाल्यो । उनीहरुसँग आफ्ना ब्रेकअपमा कतिधेरै कहानी थिए । पुरुषले उनीहरुलाई याद गर्थे, प्रेम गर्थे, मन पराउँथे । म त ‘सती सावित्री’ टाइपकी थिएँ ।
मसँग अरु विकल्प नै के थियो ?
इन्टरनेटमा मैले त्यो पल बाँच्ने मौका पाएँ जुन मैले कहिले पनि बाँचेकी थिइनँ ।
म आफ्नो उमेर गलत बताउन सक्थेँ । आफ्ना गोप्य अंगको फोटो पनि पठाउन सक्थेँ । कुनै पुरुषलाई मेरो आवाज सुनाउन लालायित बनाउन सक्थेँ । यसैबीच मैले आफ्नो अनुहार कसैलाई पनि आफ्नो अनुहारको फोटो नपठाउने कुरामा ध्यान दिएँ ।
हुन त मेरो झनक्क रिसाउने बानी छ । तर यस्ता अफेयर्सले मलाई निकै नरम र शान्त बनाउन मद्दत गरेको छ । आफ्ना श्रीमानप्रति मेरो व्यवहार पनि परिवर्तन हुन थालेको थियो ।
अत्यधिक अनलाइन अफेयर्सः
मैले २५ देखि ४५ वर्षसम्मका पुरुषसँग कुरा गरेँ । मैले उनीहरुसँग GTalk र Kik जस्ता एप्समार्फत कुरा गरेँ ।
विवाहित पुरुषसँग मैले भन्थेँ, ‘यदि म तिम्री श्रीमती भएको भए...’ र हामीले के–के गर्दथ्यौं भनेर बताउँथे । यसमा अँगालो हाल्नु, सँगै सुत्नु, फिल्म हेर्न जानु, सार्वजनिक स्थलमा चुम्बन गर्नु । म उनीहरुका लागि उनको सपनाको दुनियाँ सजाउँथे ।
मैले भिडियो सेक्स पनि गरेकी छु । मैले यति धेरै लिङ्ग देखेकी छु कि मलाई याद पनि छैन । पुरुषले कराएको आवाज मलाई निकै मनपर्छ । केही पुरुष सेक्सपछि मलाई धन्यवाद पनि दिन्छन् ।
यो सोच्दा राम्रो लाग्छ कि यी पुरुषका लागि म प्रेमिका पनि हुँ र देवी पनि । उनीहरु मलाई चाहन्छन् । मलाई हेर्नका लागि लालायित हुन्छन् ।
यस्ता अफेयर तीन महिनाभन्दा बढी चल्दैनथे । किनभने हामीलाई थाहा थियो कि यो वास्तविकता होइन, एक काल्पनिक दुनियाँ हो । तर यही दुनियाँले मलाई निकै राहत पनि दिन्थ्यो ।
म यतिका वर्षसम्म यति धेरै निराश भएकी छु । अब मलाई निकै राम्रो लाग्छ । यस्तो सम्बन्धको नशा झैं चढेको छ ।
अब वास्तविकतामा म एक वयस्क महिला हुँ । थोरै मोटी छु । तपाईंको अगाडिबाट हिँडे भने तपाईंलाई याद पनि हुँदैन । धेरैले मलाई ‘आन्टी’ भनेर बोलाउँछन् । म एक आमा र श्रीमती हुँ । सामाजिक रुपमा पनि एक भोटबाहेक केही होइन ।
वास्तविकताको सामाना गर्न मुश्किल छ । मलाई थाहा छ । मेरा साथीहरुलाई अहिले पनि मानिसहरु घुर्छन् । उनीहरुलाई ‘यम्मी मम्मी’ भनेर बोलाउँछन् । उनीहरु आर्थिक रुपमा पनि स्वतन्त्र छन् । म सोसल मिडियामा उनीहरुलाई हेर्दा आफ्नो सोचेर निकै नराम्रो लाग्छ ।
मेरो जीवन निकै निरस छ । म निकै मामुली छु । म भइनँ भने कसैलाई पनि मेरो याद पनि हुँदैन । इन्टरनेटमा म आफ्नो सपनाको दुनियाँ बाँच्छु । जसले मेरो वास्ततविक दुनियाँलाई सुन्दर बनाउँछ ।
अब म जान्छु । एक अनलाइन प्रेमी मेरो प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । उनीसँग मिठामिठा कुरा गर्नुपर्छ । उनी २७ वर्षका छन् र म ३६ वर्षकी ।
सुडानमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त